गर्भवती महिलाले आत्महत्या गरिन् तर बच्चा जन्मियो र बाँच्यो पनि, कसरी ? - Fonij Korea
लेखक: फोनिज कोरिया संवादाता	| प्रकाशीत मिति: December 23, 2018
भारतको मध्य प्रदेशको कटनी जिल्लामा एक गर्भवती महिलाले आत्महत्या गरेपछि बच्चा जन्मिएको छ । महिलाको मृत्युपछि जन्मेको बच्चाको स्वास्थ्य अवस्था राम्रो छ । बिहीबार लक्ष्मी सिंह नामकी गर्भवती महिलाले आत्महत्या गरेको बीबीसीको समाचारमा उल्लेख छ ।
फाँसीमा झुण्डिएकै बेला उनले एक बच्चालाई जन्म दिइन् । प्लेसेन्टा (नाभी) सँग बच्चा आमासँग जोडिएको थियो । जसलाई देखेर परिवारका सदस्यहरुले तत्काल प्रहरी र अस्पतालसँग सम्पर्क गरे ।
मृतक महिलाबाट जन्मिएको बच्चाका साथ जिल्ला अस्पताल पुर्याइयो । डाक्टरहरुका अनुसार अस्पताल पुग्दा बच्चाको अवस्था गम्भिर थियो । अस्पतालले बच्चालाई तत्काल आईसीयुमा भर्ना गरेपछि बच्चाको अवस्था सुधार हुँदै गयो ।
कटनी सिभिल अस्पतालका सिभिल सर्जन डा. यशवन्त वर्मा घटनाका बारेमा भन्छन्, ‘‘महिला गर्भवती थिइन् । ९ औं महिना चलिरहेको थियो । बच्चाको तौल लगभग दुई किलो थियो । महिला फाँसीमा झुण्डिदा बच्चा ग्रेभिटीका कारण तल आयो ।’’
डा. यशवन्त वर्माले मानिस जिउँदो हुँदा धेरै कुराहरु रोकेर राख्न सक्ने भए पनि मृत्यु पछि त्यो सम्भव नहुने बताउँछन् । यही कारण फाँसीमा झुण्डिएकी महिलाको गर्भमा रहेको बच्चा जन्मिएको उनको भनाइ छ ।